Akhri: Maalinta codka kalsoonida loo qaadayo RW Cabdiweli oo la shaaciyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Maalinta codka kalsoonida loo qaadayo RW Cabdiweli oo la shaaciyey
A warsame 30 November 2014
Mareeg.com: Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyey waqtiga la qabanayo kulanka gudagalka Mooshinka ka dhanka ah R/wasaare Cabdiweli iyo xukuumadiida.
Qoraal kasoo baxay baxay gudoonka ayaa lagu sheegay in 2-da Dcember oo ku beegan Slaasada la qaban doono kulanka ugu horreeya ee gudagalka mooshinka, halka 6-da December oo ah Sabti la qaban doono cod u qaadista mooshinkaas.
Gudoonka ayaa sheegay in xalliyey khilaafkii u dhaxeeyey xildhibaanda, islamarkaana si degan looga doono mooshinka.
Halkaan hoose fur oo ka aqri qoraalka gudoonka oo buuxa.
Gudoonka Baarlamaanka oo shaaciyay xilliga uu dib u furmayo kulamadii Baarlamaanka iyo dooda mooshinka
USA: Askari dilay wiil madow ah oo shaqada ka tegay kadiba markii shacabka la dejin waayey